Gịnị bụ Social Media? Gịnị Mere Companlọ Ọrụ Ga-eji Na-elekọta?
Enwere otutu mkparịta ụka banyere mmetụta ma ọ bụ enweghị mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na azụmahịa B2C na B2B. Otutu n'ime ya ka odi ala n'ihi nsogbu diri njikota ihe na nchịkọta, ma obi abụọ adịghị ya na ndị mmadụ na-eji netwọkụ mmekọrịta na-eme nchọpụta ma chọpụta ọrụ na ngwọta. Ekwetaghị m? Gaa na Facebook ugbu a wee chọgharịa maka ndị mmadụ na-arịọ maka ndụmọdụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ana m ahụ ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla. N'ezie, ndị ahịa bụ 71% nwere ike ịzụta zụọ dabere na ntinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta.
Site na ntozu oke nke mgbasa ozi mgbasa ozi na azụmahịa n’ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-achọpụta ezigbo uru ọ nwere ike inye. Ma ị na-eji usoro mgbasa ozi iji nyere aka na-ere ngwaahịa ozugbo ma ọ bụ jiri ya dị ka otu akụkụ nke usoro usoro ndu gị, na-ewere usoro a na-eme atụmatụ nke na-ejikọ usoro mgbasa ozi n'ụzọ zuru ezu na usoro ịzụ ahịa gị ga-enye gị ohere kachasị mma nke ịmepụta azụmahịa ọhụrụ. Stephen Tamlin, Branching na Europe
Kedu ihe 4 Social Media Strategies Kwesịrị Businessrụ Ọrụ Gị?
na-ege ntị - Nlekota mmadụ na-elekọta mmadụ na-aza na atụmanya na ahịa online bụ ihe ịrịba ụzọ nke na-eke a tụkwasịrị obi mmekọrịta ha. Okwesighi oke na ha igwa gi okwu, ma obu. Ikwesiri ige nti maka aha ndi oru gi, aha gi na aha ahia gi. Nke a ga - enyere gị aka ịza ajụjụ metụtara ahịa, kpuchido aha gị n'ịntanetị, ma kenye obi ike na atụmanya gị na ndị ahịa na ị bụ ụlọ ọrụ na-eche ma na-ege ntị. 36% nke ndị ahịa azụtala ndị ahịa na #Twitter
Learning - 52% nke ndị nwe ụlọ ahịa achọtala ndị ahịa ha na # Facebook na 43% nke ndị nwe ụlọ ahịa achọtawo ndị ahịa ha na #LinkedIn. Site na isonye na obodo ndị a, ị nwere ike ịge ndị isi ụlọ ọrụ ntị, ndị ahịa ị chọrọ, yana ndị ahịa gị ikwu maka isi okwu dị n'ime ụlọ ọrụ gị. Nke a ga - enyere ụlọ ọrụ gị aka n'ịmepụta atụmatụ dị ogologo oge iji merie ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Ịbanye - Ọ bụrụ n ’ị na - ekwu okwu mgbe a gwara gị okwu, ma ọ bụ mgbe enwere ohere ịre ahịa - ị na - achọ ị nweta mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ụdị ụlọ ọrụ ị bụ. Idozi ọdịnaya na ịkekọrịta isiokwu nke ọdịmma gị na ndị ahịa ga-enyere aka iwulite ntụkwasị obi na ikike na ha. Inyere ndi ahia gi aka ime nke oma gha eme ka ogha n’iru gi, obughi nani nke ha!
Ịkwalite - Itolite iru gi, netwọkụ gị, na ịkwalite ngwaahịa na ọrụ gị bụ ihe dị mkpa dị ka akụkụ nke atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta ziri ezi. Chọghị ịkwalite onwe gị mgbe niile, mana ị kwesịghị iwepụ ohere ndị ahụ na ịntanetị. Ihe karịrị 40% nke ndị ahịa emechiela azụmahịa abụọ na ise n'ihi Social Media
Tags: 2015 stats mgbasa ozi mgbasa oziazụmahịa na-elekọta mmadụ mediaịzụ mkpebigoogle plus maka azụmahịagoogle + maka azụmahịaotu mgbasa ozi ndi mmadu nwere ike isi nyere ahia gi akaotú mgbasa ozi mmadụ na-esi enyere azụmahịa akanjikọ maka azụmahịaahịa na-emechindị ahịamgbasa ozi mgbasa ozi maka azụmahịaelekọta mmadụ mgbasa ozi mmetụtaahịa ndị mmadụna-elekọta mmadụ na-eretwitter maka azụmahịa
Etu obere akpa ego na-enye aka ire ahịa
Dee 1, 2015 na 12: 09 AM
Akụkọ dị ịtụnanya Douglas! A ga-etinyerịrị ndụmọdụ ndị a ị nyere mgbe ị na-akpọsa azụmahịa gị n'ịntanetị. Mbipute ezughị. Ige ndị na-ege gị ntị ntị na iso ha na-akpakọrịta dị mkpa ka i wee nwee ike ịmata ihe na-amasị ha. Ọ bụrụ na ịmara mmasị ha, ị ga-enwe ike ịmata ndị ahịa gị ezubere iche. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa nwere azụmahịa na-aga nke ọma n'ihi ndị ahịa ha chọtara site na mgbasa ozi mgbasa ozi. Daalụ maka akwụkwọ ozi a nke ukwuu!
Dee 17, 2015 na 1: 37 AM
N'ezie ga-eme ihe ndị a. M pụtara, M na-eji na-elekọta mmadụ media dị ka akụkụ nke m ahịa mkpọsa na na ziri ezi azum maka ya, ruo ugbu a, ọ na-eme nnukwu maka azụmahịa. Mana anaghị m amachi onwe m ka post gị a nwere ike inyere m aka nke ukwuu ime nke ọma n'ụdị atụmatụ a.